Ahoana ny fametrahana Google Tag Manager sy Universal Analytics | Martech Zone
Alahady Oktobra 30, 2016 Alatsinainy Desambra 7, 2020 Douglas Karr
Nanova ny mpanjifa ho lasa Google Tag Manager izahay tato ho ato. Raha mbola tsy nahare momba ny fitantanana tag ianao dia nanoratra lahatsoratra lalina izahay Inona no atao hoe Tag Management? - Ampirisihiko ianao hamaky azy io.
Ny tag dia sombin-kaody izay mandefa fampahalalana amin'ny antoko fahatelo, toa an'i Google. Raha tsy mampiasa vahaolana momba ny fitantanana tag toy ny Tag Manager ianao dia mila ampidirina mivantana amin'ireo sombin-kaody ao amin'ny tranokalanao na amin'ny findainao ireo sombin-kaody ireo Topimaso amin'ny Google Tag Manager
Ankoatry ny tombony azo amin'ny fitantanana tag, Google Tag Manager dia manana fanohanana teratany amin'ireo rindranasa toa ny Google Analytics ary te hanararaotra anao koa. Satria miasa kely amin'ny paikadin'ny votoatiny ho an'ny mpanjifanay ny masoivohonay, manamboatra GTM manerana ny mpanjifanay izahay. Miaraka amin'ny Google Tag Manager sy Universal Analytics, afaka manamboatra hevi-baovao fanampiny amin'ny Grouping Content Analytics Google Analytics izahay nefa tsy mila manitsy kaody lehibe amin'ny tranokalan'ny mpanjifanay. Ny fandrindrana ny roa hiara-miasa amin'izy samy izy dia tsy natao ho an'ny torana fo, na izany aza, noho izany dia tiako ny antontan-taratasy ho anao.
Hanoratra lahatsoratra ho avy momba ny fikirakirana aho Fananganana votoaty miaraka amin'ny Google Tag Manager, fa ho an'ny lahatsoratra anio, manana tanjona telo aho:
Ahoana ny fametrahana Google Tag Manager ao amin'ny tranokalanao (miaraka amin'ny antsipiriany vitsivitsy ho an'ny WordPress nampiana).
Ahoana ny fomba hanampianao mpampiasa avy amin'ny masoivohonao mba hahafahan'izy ireo mitantana ny Google Tag Manager.
Ahoana ny fomba handaminana ny Google Universal Analytics ao amin'ny Google Tag Manager.
Ity lahatsoratra ity dia tsy nosoratana ho anao fotsiny, fa tena dingana iray ihany koa ho an'ny mpanjifanay koa. Io dia hahafahantsika mitantana GTM ho azy ireo ary manohy manatsara ny fomba fampidinana ireo script ivelany ary koa manatsara ny fitaterany ny Google Analytics.
Ahoana ny fametrahana Google Tag Manager
Amin'ny fampiasana ny fidiranao amin'ny Google Analytics dia ho hitanao izany Google Tag Manager safidy izao ao amin'ny menio voalohany, kitiho fotsiny Hiditra:
Raha mbola tsy nametraka kaonty Google Tag Manager ianao teo aloha dia misy mpamosavy mahafinaritra manampy anao hametraka ny kaonty sy kaontenera voalohany misy anao. Raha tsy azonao ny verbiage ampiasako dia aza hadino ny mijery ity horonantsary ity izay mamaky anao!
Voalohany, omeo anarana ny kaontinao. Matetika ianao dia hanome anarana izany aorian'ny orinasanao na fizarana misy anao mba hahitanao sy hitantanana ireo tranonkala sy fampiharana tsirairay mety ahitanao nametraka mora foana ny Google Tag Manager.
Ankehitriny rehefa apetraka ny kaontinao dia mila manamboatra ny voalohany ianao fitoeran-javatra.
Rehefa tsindrio ianao mamorona, angatahina ianao hanaiky ny Terms of Service. Raha vao manaiky ianao dia homena script roa hampidirina ao amin'ny tranokalanao:
Tandremo ny toerana ampidiranao ireo marika script ireo, tena manakiana ny fihetsiky ny tag rehetra izay hotantaninao ao anatin'ny Google Tag Manager amin'ny ho avy!
Mampiasa WordPress? Tena manoro hevitra ny Duracelltomi Google Tag Manager WordPress Plugin. Rehefa manamboatra ny vondrona Votoatiny ao amin'ny Google Analytics izahay, ity plugin ity dia mamela ny fiasa miaraka amin'ireo safidy anatiny izay hamonjy anao amin'ny alahelo be!
Raha manamboatra GTM amin'ny alàlan'ny plugin na fampidirana antoko fahatelo ianao dia matetika no angatahina ho anao Kaonty tariby. Nandeha aho ary nanodidina izany tao amin'ny pikantsary etsy ambony. Aza manahy ny amin'ny fanoratana azy na ny fanadinoana azy, ny GTM dia mahatonga azy io ho mora sy mora amin'ny kaontinao GTM.
Efa feno ve ny script-nao na ny plugin-nao? Mahatalanjona! Napetraka ao amin'ny tranokalanao ny Google Tag Manager!
Ahoana ny fomba hanomezana ny fahafaha-misafidy hiditra amin'ny Google Tag Manager anao
Raha somary sarotra loatra ireto torolàlana etsy ambony ireto dia afaka mitsambikina mivantana ianao amin'ny alàlan'ny fanomezana fidirana amin'ny maso ivoho. Akatony fotsiny ny mpamosavy ary kitiho ny Admin amin'ny menio faharoa amin'ny pejy:
Te-tsindrio ianao Fitantanana ny mpampiasa ary ampio ny fahafahanao misafidy:
[box type = ”fampitandremana” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Ho hitanao fa manome ny fidirana rehetra amin'ity mpampiasa ity aho. Azonao atao ny mifampitondra amin'ny fomba hafa ny fahazoanao misafidy. Matetika ianao dia manampy ny fahafahanao misafidy ho toy ny mpampiasa ary avy eo manome azy ireo ny fahaizana mamorona fa tsy mamoaka. Azonao atao ny mitazona ny fifehezana ny fanovana ny tag an'ny Publishing. [/ Efajoro]
Izao dia afaka miditra amin'ny tranokalanao ao amin'ny kaonty Google Tag Manager-ny ny maso ivoho. Ity dia fomba tsara lavitra kokoa noho izany, avy eo manome azy ireo mari-pahaizana momba ny mpampiasa anao!
Ahoana ny fomba handaminana ny Google Universal Analytics ao amin'ny Google Tag Manager
Na dia napetraka tsara amin'ny tranokalanao aza ny GTM amin'izao fotoana izao dia tena tsy manao na inona na inona izany raha tsy mamoaka ny taganao voalohany ianao. Hanao an'io tag voalohany io izahay Universal Analytics. Tsindrio Manampia Tag vaovao amin'ny sehatr'asa:
Tsindrio ny fizarana tag ary ho voatosika hifantina tag ianao, te-hisafidy Universal Analytics:
Mila mahazo ny kaody UA-XXXXX-X ianao amin'ny script Google Analytics izay efa ao amin'ny tranokalanao ary ampidiro ao amin'ny faritra marina. Aza mbola tsindrio save! Mila milaza amin'ny GTM izahay rehefa te handefa izany marika izany ianao!
Ary, mazava ho azy, izahay dia maniry ny handefasana ilay marika isaky ny mahita olona iray pejy ao amin'ny tranonkalanao:
Azonao atao izao ny mandinika ny toe-tsain'ny tag anao:
Tsindrio ny tahiry ary ho hitanao ny famintinana ireo fanovana nataonao. Ataovy ao an-tsaina fa mbola tsy navoaka tao amin'ny tranonkalanao ilay marika - endri-javatra tsara iray amin'ny GTM. Azonao atao ny manisy fanovana amina taonina ary manamarina ny toerana rehetra alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny famoahana ireo fanovana mivantana amin'ny tranokalanao:
Ankehitriny rehefa voalamina tsara ny tagantsika dia azontsika atao ny mamoaka izany amin'ny tranokalanay! Kitiho ny Publish dia angatahina ianao hanoratra ny fiovana sy ny zavatra nataonao. Tena manampy izany raha manana mpandrindra sy mpiara-miombon'antoka maro miasa amin'ny tranokalanao ianao.
[box type = "fampitandremana" align = "aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Alohan'ny hamoahanao ny fanovana ny tag anao amin'ny tranokalanao, alao antoka fa esory ny script Google Analytics teo aloha ao anatin'ny tranokalanao! Raha tsy izany dia hahita olana vitsivitsy sy olana lehibe ianao Analytics tatitra. [/ efajoro]
Boom! Tsindrio ianao amin'ny famoahana ary voatahiry miaraka amin'ny antsipirian'ny fanovana ny tag ny kinova. Universal Analytics dia miasa amin'ny tranokalanao izao.
Miarahaba anao, Google Tag Manager dia mivantana eo amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny Universal Analytics voalamina sy navoaka ho ny marika voalohany!
Tags: ampio ny fidiran'ny mpampiasaGoogle Analyticsgoogle tagGoogle tenifototra mpitantanagoogle tag manager manampy mpampiasagoogle tag manager containergoogle tag manager mitarikagoogle analytics rehetragtmfitoeran-tsakafo gtmahoana nohametraka google tag managerpageviewsfitantanana tagtag managerfampijery pejyanalytics manerantany
Apr 25, 2017 ao amin'ny 2: PM PM
Tena smart kentrona ianao - DIKANOKA - fella marani-tsaina is Lavorary ity lahatsoratra ity - tena izay no ilaiko mba hampiharana ny GTM. Ankafizo ireo sary voatifitra